Podcast: AfricArXiv sy TCC Africa fiaraha-miombon'antoka amin'ny fahitana ny fikarohana afrikanina - AfricArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda on 7 ny Desambra 2021 7 ny Desambra 2021
Tamin'ny Oktobra 2021, AfricaArXiv, ny vavahadin-tseraseran'ny African Open Access, nanambara fiaraha-miasa miaraka amin'ny Foibe fanofanana momba ny fifandraisana TCC Africa hanorina sy hitantana vondrom-piarahamonina manam-pahaizana iraisam-pirenena izay hanatsara ny fahitana ny fikarohana afrikanina. Joy Owango avy ao amin'ny TCC Africa sy Dr. Johanna Havemann avy ao amin'ny AfricArXiv dia mizara lalina momba ny fiaraha-miasa amin'ity podcast antsoina hoe Velocity of Content ity, nampiantranoin'i Chris Kenneally, avy amin'ny Foiben'ny Fanafoanana ny zon'ny mpamorona: https://velocityofcontentpodcast.com/an-african-platform-for-african-research/
Podcast: Sehatra afrikanina ho an'ny fikarohana afrikana miaraka amin'i Dr. Jo Havemann sy Joy Owango
“Sehatra iray avy amin'ny Afrikana, ho an'ny Afrikana, momba ny fikarohana Afrikana ity. Tsy mety ho tsara kokoa noho izany izany, ”hoy i Owango tamin'i Chris Kenneally an'ny CCC.
"TCC Africa dia mpisolovava tena nanohana ny asantsika, ary efa niara-niasa tamin'ny fomba tsy ara-potoana izahay, toy ny ataon'ny olona sy ny fikambanana ao amin'ny tontolo iainana ao anatin'ny fiaraha-miasa," hoy izy nanazava. "Miaraka amin'ity fanambarana fiaraha-miasa ofisialy ity, eto izahay hampiasa ny hetsika ataonay ary hanome an'i AfricArXiv trano any Kenya, miaraka amin'ny TCC Africa ho hita ho mpiara-miombon'antoka azo antoka ho an'ireo mpandray anjara sy andrim-panjakana Afrikana."
Tags: Ny fahitana amin'ny fikarohana afrikaninafahafahana misokatramisokatra siansaTCC Africa